December 2011 | မိုးဇက်
ကြင်နာလွန်းလှတဲ့ သူမ လာကို လာမှာပါ ။
အမှန်ဆို အရင်ကနွေးထွေးမှုကို တမ်းတတာမဟုတ်ဘူး
အမြဲတမ်း မခွဲတမ်းသွားချင်တာ ။
အချိန်ရဲ့လက်တံတွေ စီးမျောသွားတာများ ခြေသံလုံလှပါဘိ.........
သူတို့နှစ်ယောက်ကို စီးခံကာထား ကမ္ဘာခြားစေတဲ့
ယုံကြည်မှုခပ်များများနှင့် ရောသောက်နေရတယ် ။
ကြာလာတော့လည်း ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာလာအောင်
ယုံကြည်စွာတည်ဆောက်ရတာ ပင်ပန်းလွန်းရချည့် ။
အရင်ဆိုက်ကတဲက ကဗျာပါ ခုမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနှင့်ပြန်တင်လိုက်တယ် ။ အစ်မ အိမ်ဂျယ်တို့ ၊ အစ်မ ဂျက်စမင်းတို့ ဖတ်ပီးသားပါ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၁
ဘာမှလဲမမြင်ရပါလားးးး။ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၁
စကားတွေကို စွံ့အသွားစေတယ် ။ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၂
ထာဝရဘုရားသခင် ။ ။
အကျွန်ုပ်အား တိုးတိုးလေးပြောပြခဲ့ပါ ။ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၂
ချစ်သူ ငါယုံပါရစေ ၊
ငါ့ရင်ခွင်ကို ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါ ။
ရွက်လွင့်ချင်လို့ပါ ။ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၃
ကံကြမ္မာက ကိုယ့်ဘက်ကို ဓါးသွားလှည့်ပီး ကမ်းပေးရင်
ကိုယ်က ဓါးနှောင့်ဖက်ကိုလှည့်ယူရပေမယ့် ၊
ခတ်ပီ ။ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၃
အိမ်လို့မရစွာ ငါ့အာရုံတွေ မင်းဆီမှာပဲရစ်ဝဲလို့
ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မှောက်မှားနေတယ် ။ ။
အခန်း ၊ ၁ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၄
အခန်း ၊ ၁ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၄
ပင့်သက်တစ်ခုကို လှိုက်ခနဲ ဆွဲချကြည့်တယ်
ခါးတယ် ။ ။
မှောင်တယ် ။ ။
ချစ်သူထံ ခွင့်မတောင်းပဲ ရင်ဘက်တွေကို
ကောင်းကင်ပြင်မှာ အပြာရောင်ကိုမရှိဘူး ။ ။
အခန်း ၊ ၂ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၁
အနာဂတ်တွေ ဟင်းလင်းပွင့်နေတဲ့ အညတရ
ချစ်သူမင်းလဲ ငါ့ရင်ထဲက ဆုတ်ခွာတော့ ။ ။
အခန်း ၊ ၂ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၁
သောက်မြိုနေရတာ နင်တယ် ။
မျိုးပွားနေရတာ လက်ပန်းကျတယ် ။
မောတယ် နင့်ကိုချစ်နေရတာ မောတယ် ။
ပင်ပန်းတယ် မင်းမသိအောင် တယုတရတွေ
အခန်း ၊ ၂ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၂
ဘဝတစ်ခုကို ဆွဲဆန့်ခွင့်ပေးပါ ဘုရားသခင် ။ ။
သောက်သုံးခွင့်ပေးပါ ဘုရားသခင် ။ ။
မျောလွင့်ခွင့်ပေးပါ ဘုရားသခင် ။
အခန်း ၊ ၂ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၂
ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ ငါမင်းကိုပဲ ချစ်ခဲ့တယ် ။
တလွလွ ဖြူဖြူစင်စင်ချစ်ခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် မင်းစိတ်ထဲမှာတောင် ငါ့နာမယ်မရေးထိုးထားတော့
ငါနှလုံးခုံသံတွေ ခေါက်သိမ်းလိုက်မယ် ချစ်သူ ။ ။
အခန်း ၊ ၂ ၊ နာကျင်မှု အပိုဒ်ခွဲ . ၃
အချစ်တစ်ခုကို ပြစ်ပြစ်ခါခါ ကြေးတင်ပီး
ဘဝတစ်ခုနှင့် မိုက်မိုက်မဲမဲ လောင်းကြေးထပ်လိုက်တယ်
ရလဒ်တစ်ခုကို ခပ်ရဲရဲ ဖောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့
အခန်း ၊ ၂ ၊ ခံစားဝေသီမှု အပိုဒ်ခွဲ . ၃
မပုတ်ခတ်ပါနှင့် ။ ။
ပုတ်မချပါနှင့် ။ ။
ငါ့အနာဂတ်ကို မီးလောင်တိုက်မသွင်းလိုက်ပါနှင့် ။ ။
အခန်း ............ ၊ ............. ( ဇာတ်သိမ်း )
ကြယ်အကြွေကိုဆောင့်နေရတာ ငါမောတယ် ၊
ကိုယ့်ဘာသာပဲ လောင်ကျွမ်းပြာကျလိုက်တော့မယ် ၊
ဒါပေမယ့် ငါ့ဝိဥာဉ်တော့ သန့်ရှင်းသွားပါရစေ ။ ။
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |9Replies
တစ်နေ့က နက်ဆိုး(Demon) ဘော်ဒါဆီအလည်သွားတယ် ။ ၈၇ လမ်း မှာနေတဲ့ ဒေါက်တာထူးမြင့်ဆီကိုပါ ။ ဒီကောင်ကြီးကလဲမိန်းမရပီးမှ ကိုယ်တွေဆီကိုမလာတာ အတော်ကြာတော့ သတိတရသွားတာပါ ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး သူကျောင်းတတ်တုန်းကတော့အမြဲလိုလို တွဲဖြစ်တဲ့ဘော်ဒါတွေပေါ့ ။ နက်ဆိုးက ဒီလိုပဲလမ်းကြုံတဲ့လူကို ပေါင်းတာဆိုတော့အဟီး ။
အိမ်ရှေ့ရောက်တော့သူ့မိန်းမကို အခန့်သားတွေ့တယ် ။
“ဟဲ့ နင့်ယောက်ျားငါ့သယ်ချင်း ဒေါက်ချာ ငထူး ရှိလား ”
“အပြင်သွားတယ်၊ ခဏနေပြန်ရောက်မယ် ၊ လာအထဲဝင်လေ ”
နက်ဆိုးလဲလာနေကျဆိုတော့ သူ့မိန်းမနှင့်လဲ ခင်နေတော့ ကိုယ့်ကို ဧည့်ခန်းထဲဝင်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ် ။ဧည့်ခန်းထဲမှာ လူငယ်တစ်ယောက်နှင့် သူ့မိန်းမက စကားပြောနေတယ်ဗျ ။ ကောင်လေးက လူရည်သန့်လေးပါ။ နက်ဆိုးကလဲ ကောင်လေးဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ် ။
“ဒီကိုပါပဲဟာနင့်ငထူးမတွေ့တာကြာလို့ လာတာပါ ”
“အေး ၊ ခဏနော်ငါဟင်းချက်ရင်းတန်းလန်းမို့ ၊ ထမင်းစားပီးမှ ပြန်ပါ့လား ”
အဟဲ ရုပ်တည်ပဲ၊ အခွက်ကလဲပြောင်တယ် ၊ တစ်ကယ်လဲကောင်းရင်စားသွားမှာ ။
“အေး ၊ ဒါနှင့်သူ့နာမည်က ကျော်ထူးတဲ့ ၊ သူလဲ နင့်သယ်ချင်းကိုဆောင့်နေတာ ၊ နင်တို့စကားပြောနှင့် ငါထမင်းသွားချက်လိုက်အုံးမယ်”
သကောင့်သားမိန်းမကပြောပီး ဆောင့်ငင့်ဆောင့်ငင့်နှင့်မီးဖိုချောင်ဖက်ဝင်သွားတယ် ။ နက်ဆိုးလဲ ရှေ့စားပွဲပေါ်ကဆေးကျောင်းထုတ် ကျမ်းမာရေးစာဆောင်ကို ယူဖတ်နေလိုက်တယ် ။ အတော်ကြာတော့ ကောင်လေးက စကားပြောဖော်စရှာတယ်။
“ဆရာက ဆရာထူးတို့နှင့် Batch (Batch = ကျောင်းတတ်တဲ့နှစ် တူတာကိုပြောတာပါ) အတူတူလား ”
“ အာ………………ဘယ်ကလာ၊ ကိုက ဆရာဝင်မဟုတ်ပါဘူး ”
ကောင်လေးကနက်ဆိုးစာဆောင်ကို ရုပ်တည်ကြီးနှင့် သိသလို တတ်သလို ဖတ်နေတာကို အထင်ကြီးပီးမေးနေတာ ။ ပီးတော့ “အော် ” ဆိုပီး နက်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတာ အသေအချာကြီးကို ။ နက်ဆိုးလဲ စာအုပ်ကိုစားပွဲပေါ်ပြန်တင်ပီး
နက်ဆိုးကအဲလိုပဲကိုယ့်ကိုအထင်တကြီးရှိလာပီဆို လွတ်တော့တာ (လေ) ။ ကောင်လေး မျက်လုံး တောက်တောက်လေးနှင့်နားထောင်နေတယ်။
“ ဒါနှင့်ငါပြောရအုံးမယ်ကွ၊ မင်း ယုံ တွေအကြောင်းကိုသိလား ”
ကောင်လေးကနက်ဆိုး အရင်းမရှိ အဖျားမရှိ ပြောလိုက်တဲ့စကားကို နားမလည်ဘူး နဝေတိန်တောင်နှင့်ပြန်မေးတယ်။
“အော် ………ယုံ ဆိုတဲ့သတ္တဝါကို ဆေးပညာဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုအကြောင်းပါ ”
“ဟုတ် ၊ ပြောအစ်ကိုဘာတဲ့လဲ ”
“ သူတို့ရဲ့Digestive tract (အစာအိမ်လမ်းကြောင်း) က လူနှင့်အတော်ဆင်တူတယ်ကွ”
“ ဟင် ၊ ဟုတ်လား ၊ ဘယ်လိုတူတာလဲဗျ ”
ကောင်လေးမသိနားမလည်သော အကြောင်းအရာကြောင့် စိတ်ဝင်စားစွာ စကားထောက်ပေးတယ် ။
“ အင်း………..သူတို့ရဲ့ Esophagus လို့ခေါ်တဲ့အစာရေမြို ၊ Stomach လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ် ၊ Intestine ဆိုတဲ့ အူအပိုင်းတွေ ၊ Rectum & Anus လို့ခေါ်တဲ့ စွန့်ထုတ်အင်္ဂါအပိုင်းတွေက အတော်ဆင်တယ်ကွ။ ပီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေလဲ အတော်ဆင်တူတယ် ”
“ ဒါပေမယ့်ယုံ တွေမှာတစ်ခုထူးခြားတာက ”
နက်ဆိုး ဆက်မပြောသေးပဲကောင်လေးကို စိုက်ကြည့်လိုက်တယ် ။ ကောင်လေး စိတ်အားထက်သန်စွာ နားထောင်နေတာတွေ့တော့ ကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်ပီး၊
“…………..အရွတ်စိမ်းတွေ၊ မြတ်တွေပဲစားကြတော့ ၊ Digestion ကိုတစ်ခါထဲအပီးမလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး Stomach ကအစ ၊Rectum ပိုင်းအဆုံး ။ သူတို့စားတဲ့ဟာတွေကို သူ့ရဲ့ Appendix လို့ခေါ်တဲ့ အူအတတ်လေးကလူတွေထက်ရှည်တယ် ၊ လူတွေမှာက ရှိတယ်ဆိုရုံပဲ ၊ အဲ …. အဲ့အထဲမှာသိမ်းထားတယ် ။ နောက်မှမစင်အဖြစ်စွန့်ထုတ်ပီး ပြန်စားတယ် ”
“ဘယ်လို ….ဘယ်လိုအစ်ကို ၊ ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး ”
“ အော် ……ဒီလိုကွ ၊ သူတို့က ပထမ ဥပမာ မြတ်တွေကိုစားလိုက်တယ်ကွာ ၊ အစာအိမ်ထဲရောက်တယ် ၊ ချေဖြတ်တယ်၊ နောက် အစာအိမ်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ အူအတတ်လေးထဲကိုထည့်သိမ်းထားတယ်ကွ ၊ ပီးတော့ ညအချိ်န်ရောက်ရင်မစင်အဖြစ်ပြန်စွန့်တယ်ကွာ ၊ ပီးတော့ အဲ့မစင်ကိုပဲ ပြန်စားပီး ၊ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အဲ့အထဲကအဟာရတွေကို Digestive system တွေက စုပ်ယူတယ် ၊ သူတို့ရဲ့ အစာခြေဖျက်မှုစစ်စတန်က အားနည်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာကွ ”
“ ဟင် ၊ ဟုတ်လားဗျ၊ အင်း……. အင်း…………. ဆေးပညာရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေက စိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျ ”
စကားတောင် ဆုံးအောင် မပြောလိုက်ရသေးဘူးသကောင့်သားမိန်းမက ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်လာတယ် ။
“ အေးဟယ်၊ ထူးမြင့်ကလဲ ခုထိပေါ်မလာသေးဘူး ၊ သွားလိုက်ရင် ဆူဋလိပ် ရေထဲလွတ်လိုက်သလိုပဲ တော်တော်နှင့်ပေါ်မလာဘူး”
ဆိုပီး သူ့ယောက်ျားကိုဂုဏ်တွေဒပ်တွေတပ်ပီးမေတ္တာပို့နေတာ ၊ ပီးမှ
“ ကျော်ထူးလဲသူ့ကိုဆောင့်နေတာ ၊ သူက တတိယနှစ်စာမေးပွဲအတွက် ထူးမြင့်ဆီမှာ စာလာမေးတာ ၊ ဆောင့်နေတာကြာပီ ”
နက်ဆိုး မျက်လုံးအတောင့်လိုက် ပြူးသွားတယ်၊ သကောင့်သား မိန်းမ ပြောတဲ့စကားကြောင့် ၊ ဒါနှင့် ထိတ်လန့်တကြား ထမေးလိုက်တယ် ။
“ ဟင်…… သူကဆေးကျောင်းသားလား ”
“ဟုတ်တယ်လေ၊ ခုတတိယနှစ်ကို Supply ( ကျသောကြောင့် ကျတဲ့ဘာသာကိုပြန်ဖြေခြင်းကိုခေါ်သည် ။) ထိလို့လေအဲ့ဒါ ထူးမြင့် ဆီမှာ စာလာမေးတာလေ ၊ နင်ကလဲ အလန့်တကြား ဘာဖြစ်လို့လဲ ”
နွားရှေ့ထွန်ကျူးလို့ကျတဲ့ချွေးသီးချွေးပေါက်များလို ၊ မျက်ဖြူစိုက်သွားသော နောင်တတွေနှင့်
“ ဟိုလေ ………..အဟီး ………… ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ”
“ ဟိုလေ…………ဝင်စရာလေးရှိလို့ ဒိုးလိုက်အုံးမယ် ”
“ဟင် ၊ နင်ထူးမြင့်ကို မဆောင့်တော့ဘူးလား ”
“ ဟို………အဟီး………… မဆောင့်တော့ဘူး ၊ ဒီကောင်လာရင်သာ ငါလာသွားတယ်လို့ပြောလိုက် ၊ ညကျတော့လဲငါသူ့ဆီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့မယ် ။ အခုတော့ လစ်ပီ ……….. အဟီး ”
သကောင့်သားမိန်းမချက်တဲ့ထမင်းလဲမစားဖြစ်တော့ဘူး ၊ ဆက်ထိုင်ရမှာလဲ အတော်စတွန့်သွားတယ် ၊ နောက်ကျောလဲကိုယ့်ဘာသာမလုံ၊ စပ်ဖြဲဖြဲ ရှက်ကန်းကန်းနှင့် ဆိုင်ကယ်ဦးထုတ်ကောက်ဆောင်းပီး တစ်ချိုးထဲထလစ်လာတာမှုံနေတာပဲ ။
နက်ဆိုး( Demon )
Posted in နက်ဆိုး(Demon) ရဲ့ လက်သီးပုန်း | 1 Reply
ဒီလမ်းလေး ၊ ဒီထိုင်ခုံလေး ၊ ဒီလေညှင်းလေးတွေကို
ဒို့နှစ်ယောက် လုရူခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား ချစ်သူ ။ ။
လေအလွင့်မှာ ကြွေခဲ့ရတဲ့ ငါ့နှလုံးသွေးရွက်နုတွေ
အမှတ်တမဲ့ မေးမှိန်ခဲ့ရတယ် ။ ။
မင်းနှင့်ပတ်သက်တိုင်း ငါ့မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ
အနာဂါတ်တွေ လင်းပွင့်ဖို့ ထုဆစ်ခဲ့တာ
ငါကတော့ မင်းကြည့်ဖို့အတွက် ကြွေရတဲ့ကြယ်
ငါသာဖြစ်ချင်ပါတယ် မင်းအတွက် ထာဝရ ပေးဆပ်နေမဲ့သူပါ ။ ။
နာကျင်မှုတွေနှင့် ငါ့မှာသေရာပါလို့ ၊
ထူထောင်ရမလဲ ။ ။
ငါ့ နှလုံးသားက မင်းရက်စက်မှုအသံတွေကိုကြားနေရတယ်
ခုချိန်ထိ ငါဆောင့်နေတယ်လေ ။ ။
လက်တွေ့ဘဝမှာ အသက်ဆက်နေရတယ် ။ ။
ကိုလွမ်းပိုင်ရှင် နှင့် ကျွန်တော်မိုးဇက်တို့ အလွမ်းတွေခတ်ကြည့်တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါ ၊
နင့်ကိုငါချစ်တယ် ။ ။
နင့်ကို ငါချစ်တယ် ။ ။
( ငါတောင်းပန်ပါတယ် )
နင့်ကို ငါ အရမ်းချစ်နေပါလားလို့
ငါအားငယ်နေမိတာ ဆန်းသလား ?
နင့်ကို ငါချစ်တယ်။ ။
ငါ့ဘဝမှာ အမှန်တကယ် တည်မြဲနေမယ့်
( နင်သေချာနားစိုက်ထောင်ထား )
နင့်ကို ငါ ချစ် တယ် ။ ။
၁။ ရိုးဒီ ( သမားရိုးကျတံဆိပ်ကပ် အရက်ပုလင်းနဲ့ ခေါင်းရိုက်ခွဲခံရ )
၂။ ရိုးဒီ ( စကားလုံးများနှင့် ပစ်ပေါက်ခြင်းကြောင့် နားရွက်နှစ်ဖက် ဒဏ်ရာရရှိ )
၃။ ရိုးဒီ ( ဆောင့်ကန်ခံရတဲ့ နှလုံးသား ပုံမှန်လှုပ်ရှားရန် ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ် )
၄။ ရိုးဒီ ( ကံကြမ္မာရဲ့ လျှောထိုးဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့် ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲနှင့် လွဲဖွယ်ရှိ )
၅။ ရိုးဒီ ( ဘယ်ဘက်ရင်အုံ အညိုအမည်းစွဲ၊ လောကဓံနဲ့ပွဲ )
၆။ ရိုးဒီ ( တံတောင်စာမိ၍ မျက်ခုံးကွဲ၊ လောကကြီးနှင့် ခြေစမ်းပွဲ )
၇။ ရိုးဒီ ( အနာဂတ်ကို ခေါင်းခုန်အတိုက်၊ ပြုတ်ကျ၊ ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေ )
၈။ ရိုးဒီ ( ဂိုးသမားနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းအတွေ့၊ ကြွက်တက်၊ လဲကျ၊ ကျောနံပါတ် ၂၆ )
၉။ ရိုးဒီ ( လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုး အပြစ်တင်သံတွေကြား ခြေထောက်နှစ်ချောင်းဟာ သွင်သွင်ကျိုး )
၁၀။ ရိုးဒီ ( ဘောလုံးကို ယှဉ်အလုမှာ အထမ်းစင်နဲ့ တွေ့သွားရှာတဲ့ ရိုးသားမှု )
၁၁။ ရိုးဒီ ( ဘုရားသခင်အား ပြန်ပြောမိသဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ ၀ိုင်းကြဉ်ခံခဲ့ရ )
ကျွန်တော့ဘော်ဒါ ကိုရိုးရဲ့ကဗျာပါ ။ အရမ်းကြိုက်လို့ သယ်ချင်းတွေလဲဖတ်ရအောင် တင်လိုက်တယ် ။
Posted in ကဗျာ |3Replies
ညာခဲ့တယ် သူငါ့ကိုညာခဲ့တယ် ။ ။
ချစ်ခဲ့ပေမယ့် သူငါ့ကိုညာခဲ့တယ် ။ ။
ငါ့နှလုံးသားကိုခတ်ပြီး သူငါ့ကိုညာခဲ့တယ် ။ ။
ပြောခဲ့ပေမယ့် သူငါ့ကိုညာခဲ့တယ် ။ ။
သူငါ့ကို ညာ ခဲ့ တယ် ။ ။
ညာ ခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် လက်ခနဲထတောက်သွားတဲ့ ကြေကွဲမှုမှာတောင်
( မင်းကတော့ ငါ့ကို ညာ ခဲ့ တယ် ......... ချစ်သူ )
ငါတစ်ယောက်ထဲ ထိုင်ဆောင့်နေတယ် ၊
ခတ်တာက The End စာတမ်းမထိုးခင်
သူမ မီးခလုပ်ဖြုတ်ချလိုက်တယ် ၊
ငါ့နံပါတ်က ဘယ်လောက်လဲ ?
ငါတို့ဘ၀တွေ စုတ်ပြတ် သွားခဲ့ရပြီ
ပစ်ခတ် တာလဲ ခံခဲ့ရတယ်
ငါတို့ဘ၀ အနာဂတ်တွေ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီ
ချုံးချုံးကျနေတဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်
အကွဲကွဲ အပြဲပြဲခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒ
ငတ်ပြတ်နေတဲ့ လူထုတွေရဲ့ ဘ၀
ဒုက္ခ သည်ဖြစ်ရေး တရက်မနှေးရအောင်
အမှားတွေ မရှင်းတဲ့ အဖြေတွေပေး
မဟုတ်ပါဘူးရယ်လို့ မင်း ငြင်းချင်သေးလား
မင်း သတင်း ၊ မင်း အတင်းတွေ
ဒုက္ခသည် အဆင့်နှင့် ကမ္ဘာမှာ
ခုတော့လဲ မင်း က
မင်း လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်ဒဏ်
နီဂိုးဘုရင်နှလုံးမှုလို့ ဆောင့်ကြည့်နေတယ် ။ ။
ငါ့နာမယ်ပါသွားတယ် ။ ။
(မဟုတ်ဘူး ငါ့နှလုံးသားပါ ကြားညပ်ကြွေဆင်းခံရတာ ။ )
ဒီဇင်ဘာရဲ့ မနက်တွေနှင့် တစ်မိုးသောက်ချင်ခဲ့တဲ့
ငါ့ရင်ခုန်သံ သံဇဉ်ညှိမပေးခဲ့ဘူး ။ ။
မျှော်လင့်ချက်တွေတောင် ပါးလျှခဲ့ပီ ချစ်သူ ။ ။
မင်းသဂြိုလ်ခဲ့တာ ငါ့ဘဝ ငါ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးပဲ ။ ။
ငါဟာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ပဲ
အသည်းကွဲ ကဗျာဆရာ ( ကဗျာရေးတဲ့သူ ) ။ ။
နှင်းစက်တွေနှင့်နိုး ထ လာတဲ့
ဘာ ...................။ ။